डा केसीको ९९ प्रतिशत माग पूरा भइसक्योः नेकपा नेता मिश्र
काठमाडौँ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवले अनशनरत प्राध्यापक डा गोविन्द केसीको सबै माग पूरा भइसकेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा आइतबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले थपे, “काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने डा केसीको माग सम्बोधन भइसकेको छ । अब नयाँ मेडिकल कलेज काठमाडौँमा खोलिने छैन । यसबाट मनमोहन अधिकारी मेडिकल कलेज पनि प्रभावित भएको छ ।”
काँग्रेसमा अनुशासनकाे खाँचाे रहेकाे देउवाकाे जिकीर
दमौली । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र अनुशासनको खाँचो रहेको बताएका छन् । तनहुँ काङ्ग्रेसले आज दमौलीमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले अनुशासनभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि काम गर्न नहुनेमा जोड दिए । विशेष अधिवेशनका नाममा फैलाइएको हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्दै सभापति देउवाले केही गुनासा भए पार्टीभित्रै बसेर छलफल गर्न सकिने तर विधि विधानबाहिर गएर सञ्चालन हुने गतिविधि पार्टीलाई मान्य नहुने बताए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले अध्यक्ष मण्डलको संयोजकको जिम्मेवारी महेन्द्रराय यादवलाई दिने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा शनिबार बसेको बैठकले चक्रीय प्रणालीअनुसार यही माघ ६ गतेदेखि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य यादवलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
ओली सरकारलाई देउवाले लगाए यस्तो आरोप
कस्तो छ नेता भरत मोहन अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था !
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका छन् ।
काठमाडौं । फागुन ३ गते २०७४ मा गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकाले ११ महिना पूरा गरेको छ । यो अवधिमा सरकारको प्रशंसाभन्दा आलोचना धेरै भयो ।
पार्टी एकताले गति लिन नसक्दा सयौँ नेता कार्यकर्ता बेरोजगार जस्तै भएः नेता रावल
अछाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावलले पार्टी एकताको कामले गति लिन नसकेको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठनद्वारा बिहीबार अछाम सदरमुकाम मङ्गलसैनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “केही समय अघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले दिएको सुझावअनुसार पार्टी एकताको कामले गति लिन सकेको छैन ।”
पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई ४ कराेड धराैटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौँ । विशेष अदालतले पूर्ववनमन्त्री तथा कालिका कन्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा रु. चार करोड धरौटी बुझाएर रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलाशले बुधबार पाण्डेलाई सो रकम धरौटी बुझाएर रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौँ । एकीकरणको बाँकी काम सक्ने कार्यदिशा पाएको नेकपाको ९ सदस्यीय कार्यदलमा पार्टी विधानसमेत परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । विधानको प्रस्तावनामा पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य साम्यवाद लेख्ने सहमति भएको हो ।